खुल्ला चौरमा विद्यार्थी, कक्षाकोठामा गाइगोरू ! – Yug Aahwan Daily
खुल्ला चौरमा विद्यार्थी, कक्षाकोठामा गाइगोरू !
युग संवाददाता । २३ मंसिर २०७६, सोमबार १५:३४ मा प्रकाशित
सल्यान : बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–६ अम्रामा रहेको गंगा प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्म पढ्ने ११ जनामात्रै विद्यार्थी छन् । विद्यार्थी संख्या थोरै भएपछि पठनपाठन समेत प्रभावित भएको छ ।
कक्षा पाँचसम्म सञ्चालनमा रहेको यस विद्यालयमा कक्षा एक मा दुई जना, कक्षा दुईमा दुई जना, कक्षा तीनमा दुई जना, कक्षा चारमा चार जना र कक्षा पाँच मा एक जना विद्यार्थी अध्यनरत छन् ।केही वर्ष अघिसम्म यो विद्यालयमा १ सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गरेको भएपनि अहिले घटेर एक दर्जनभन्दा कममा छरेका छन् । विद्यार्थी कम भएको बहानामा शिक्षक पनि विद्यालयमा कम मात्रै आउने गरेका छन् । चार जना शिक्षक कार्यरत विद्यालयमा शिक्षकहरू अनियमित हुन थालेपछि उपस्थित शिक्षकले विद्यार्थीलाई चौरमा एकैठाउँमा राखेर पढाउने गरेको देखिन्छ ।
स्थानीयवासिन्दाले भने विद्यार्थी कम भएको बहाना बनाएर शिक्षक विद्यालय नजाने गरेको आरोप लगाएका छन् । अन्य शिक्षकहरू अनुपस्थित भएपछि चौरमा एकठाउँमा विद्यार्थी राखेर पढाउनु परेको शिक्षिका चम्पा केसीले भने बताइन ।
‘हरेक कक्षामा एक–दुई जनामात्रै विद्यार्थी छन् ।’ उनले भनिन् ‘त्यही भएर चौरमा एकै ठाउँमा राखेर पढाएकी हुँ । शिक्षक नभएर होइन ।’ शिक्षकले सबै विद्यार्थीलाई चौरमै पढाउन थालेपछि कक्षाकोठामा भने गाईगोरू बस्न थालेका छन् । सबै विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर एकै शिक्षकले पढाउँदा विद्यार्थीको पढाइ समेत बिग्रिएको अभिभावकहरूको गुनासो छ ।
१२ वर्षमा १ सय विद्यार्थी गायव
२०६४ सालको तथ्याङ्क हेर्दा विद्यालयमा १ सय ७ जना विद्यार्थी रहेका थिए । तर, अहिले १२ वर्षपछि विद्यालयमा झण्डै १ सय विद्यार्थी गायव भएका छन् । विद्यालयमा विद्यार्थीहरू लगातार घटेपनि विद्यालयले भने कुनै चासो दिएको छैन । विद्यालयमा सरकारले करोडौँ लगानी गरेर निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरू विद्यार्थी नभएकै कारण प्रयोगविहीन हुन थालेका छन् ।
विद्यालयले भने निजी विद्यालयका आकर्षक योजनाका कारण सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घटेर निजी विद्यालयतर्फ गएको दावी गरेको छ । विद्यालयमा पठनपाठन गतिलो नभएपछि आफूहरू बाध्य भएर अन्य विद्यालय रोजेको अभिभावकको भनाइ छ । नगरपालिकाले भने दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ । नरपालिका अन्तर्गतको शिक्षा शाखाका प्रमुख चक्रबहादुर रावतले यस्ता प्रकृतिका विद्यालय अरू पनि भएकाले दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्जको नीति अघि सारेको बताए ।